Wasiirka Ciyaaraha oo Daahfuray Tartanka Horyaalka Kubada Koleyga ee Kooxaha Heerka Kobaad |
Wasiirka Ciyaaraha oo Daahfuray Tartanka Horyaalka Kubada Koleyga ee Kooxaha Heerka Kobaad
Hargeisa(GNN):-Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, mudane Boos Mire Maxmed, ayaa shalay si rasmiya u daahfuray qori tuurka kubada kolayga ee kooxaha heerka koobad.
Wasiiku waxa uu sheegay in mar labad iyo mar saddexaadba ay ka go’an tahay sidii loo joogtayn lahaa qabashad koobka kubada kolayga ee kooxaha heerka koobada.
Sidoo kale wasiirku waxa uu dhallinyarada ku booriyay sidii ay hadh iyo habeen uga qayb qaadan lahaayeen orodada qaybahooda kala duwan.
Agaasimah waaxda ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid ayaa sheegay in hirgalinta koobkan ay iska lahayd wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubada kolayga Somaliland, Maxamed Yuusuf Cilmi, ayaa sheegay in sideed kooxood ay ka qayb geli doonaan tartanka horyaalka kubada kolayga ee kooxaha heerka koobaad.
Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane Boos Mire Maxaamed isaga oo arrimahasi ka hadlaya waxa uu yidhi. “Ciyaartoygu waa in uu ka horreeya dadka kale ee caadiga ah ee halkan jooga, in guud ahaan da’yartu ay u soo jeedsato orodka iyo kubada, oo sida Shiinaha aynu noqono dad gabi ahaanba wada orda, waxa waxa lagu noqdaa akhlaaqda aad la timado, waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba halkan ka balan qaadayna in aynu wadayno wixii itaalkeena ah”
“Waxaa aynu maanta daahfurayna, horyaalka kubada kolayga ee kooxaha heerka koobad somaliland ee 2021 tartanka kubada kolayga oo ay ka qayb gali doonan sideed kooxood.
Horyaalkani waxa uu socon doona ilaa bisha sagaalad waxanu bilaabim doona bisha shannaad ee sannadkan ee soo socota hadii ILLAAHEY yidhaaho, tartanka waxa maalgeliyay isla markaana kharashkiisa bixiyay wasaradda dhallinyarda iyo ciyaaraha”Ayuu yidhi agaasimaha waaxda ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubada kolayga Somaliland, mudane Maxamed Yuusuf Cilmi waxaa uu yidhi. “Tartanku dhawaan ayaanu ku rajo weynahay in u qabsoomo bacdal Ramadaan haddii ILLAAHEY yidhaaho, inay kaga mashquulaan balwada noocyadooda kala duwan iyo sida tahriibka cunista qaadka iyo wixii la mid ah.
Waxa aan dhaman kooxaha ka qayb-galaya koobka horyaalka aan ugu baaqaya in ay diyaar garooban maaddama la inoo daahfuray hoyaalkii kubada kolayga ee kooxaha heerka koobad, isla markan aad bilowdan aalamiitadii iyo waxa kasta oo aad ugu diyaar garoobi kartaan tartanka horyaalka kubada kolayga iyo kooxaha heerka koobad”